Indlela yokucoca ubuso bamachashazi amnyama ekhaya
Enye yeengxaki ezingavumelekanga amantombazana ukuba aziphakamise ukubonakala kwazo kwisibuko ngamachashaza amnyama ebusweni. Okanye, ngokwezenzululwazi, ii-comedones. Masithi ngokukhawuleza ukuba le ngxaki ayixhomekanga kuphela kwixesha lokuguquka. Unokuhlupheka kwaye abo bangaphezu kwama-20. Kwaye ngoku kuphakama imibuzo eninzi: indlela yokucima ubuso bamachaphaza amnyama ekhaya? Ziziphi iinkqubo ezona ziphumelele kwiirononi zobuhle? Ziziphi izizathu zamatsha amnyama ebusweni? Malunga nento yonke - ukwenzela ...
Izizathu zokubonakala kwamachashazi amnyama ebusweni
I-Comedones - amachaphaza amnyama amaninzi - ayenziwa ngenxa yokugubungqa kweengqungquthela ezixhambileyo ebusweni ngothuli, iiseli ezifile kunye neentlupheko ze-sebum. Ngokuqhelekileyo amachashaza amnyama avela kubanini besikhumba seoli. Zichaphazela oko kuthiwa yi-T yendawo ebusweni: impumlo, ibunzi kunye ne-chin. Ziziphi izizathu ezikhokelela kwisithombe esinjalo esingathandekiyo? Okokuqala, oku kunonyameko lokunyamekela kwesikhumba. Kubalulekile ukucoca isikhumba ekuseni kwaye kusihlwa. Akukho siganeko kufuneka ushiye iziqholo zobusuku. Wena, mhlawumbi, uvila ukuhlamba i-make-up, kodwa kusasa kwamanqaku amnyama abe kabini ngaphezulu. Emva kwayo yonke into, ingagqitywa ngcola ithola indawo efihliweyo kwiipilisi zesikhumba. Iimonkco ezikhethiweyo ezingenakulungiswa zingabangela ukuba i-acne. Ngokomzekelo, isiseko kufuneka sibe sisiseko samanzi, akukho powrikhi wesipopu akufanele isetyenziswe. I-powder efanayo emele ifakwe kuphela kwisiseko. Xa uthengisa nayiphi na i-arhente yokuhlambulula okanye ihlambulule, funda ngokucophelela ukuba yintoni kwaye yintoni na uhlobo lolusu olujoliswe kuyo.
Ukutya okungafanelekanga kuyindlela ecacileyo yokubonakala kwamachashaza amnyama. Ukubonakala kwamacaka amnyama kukubangela ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kokutya okunothekayo, ukutya okunamafutha, ikhofi kunye notywala. Kufuneka uvelise iziqhamo kunye nemifuno ekutya kwakho. Efanelekileyo: khetha ukutya okunceda ukuhlambulula umzimba. Kwixesha elizayo, xa ushintshela kwimveliso eqhelekileyo, gcina ulusu lobuso, emva koko umkhiqizo unokwehla. Ngokomzekelo, udle ishokoleta waza wabona ukuba kukho amachashaza amnyama amaninzi. Ngenxa yoko isiphetho sokuthi unokuyeka umveliso, okanye uyisebenzise.
Ukuvalwa kwamathambo kungabangela izifo ezingapheliyo, iingcinezelo, utshintsho lwe-hormone. Kule meko, kwaye kuzo zonke ezinye, kubalulekile ukudibana nodokotela. Emva koko, kunokwenzeka ukuba uya kufuna imithi. Izonyango zasemakhaya zilungile, kodwa iingcebiso kunye noviwo kunye neengcali azizange zithintele. Ubuncinane, uya kuba nethemba ngakumbi ekuthembekeni kwesizathu se-comedones.
Sula ubuso bamachashazi amnyama
Asinakukuqinisekisa ngeengxelo zokuba kukho iindlela kunye neziyobisi eziza kusombulula le ngxaki kanye kanye. Kakade, ukukrazula i-comedones kunokwenzeka ngonaphakade. Kodwa kuya kuxhomekeka kwindlela enzima ngayo ukuza kunyango. Njengoko satshilo ngaphambili, ingxaki kufuneka ifakwe kwindlela epheleleyo: ukusebenzisa iindlela zeronon, izimonyo ezikhethekileyo kunye neyeza zasemakhaya. Kwi-salon uza kuhlambuluka ngokufanelekileyo, emva koko awusayi kuphinda ube ne-acne, kodwa kuphela ukuba awuyilibala ngesikhumba ukuze unakekele rhoqo. Ukuba ukulwa nale ngxaki kubakho rhoqo, uya kujonga impilo yakho kunye nesondlo, ngoko ekugqibeleni, ulusu luya kucoca.
Kwaye makhe sithethe malunga nendlela yokucoca amachashaza amnyama ekhaya. Okokuqala, ukucoca kwansuku zonke kunye nokucoca kwesikhumba kuyimfuneko. Ngelishwa, akukho ndlela yokulungisa izimonyo zamanqaku amnyama. Into kuphela endifuna ukuyibona kukuba ukuthenga kubo kungcono kuma-pharmacy. Bayeke apho baya kuba kubi kakhulu, kodwa basebenze ngakumbi kwaye banesiqinisekiso esikhulu somgangatho.
Ukuba awunayo ikhetho elingagqitywanga ngokupheleleyo, iitrayi zentlambo ziza kukuhlangula. Le ndlela yindlela ekhuselekileyo yokukhusela ekhaya. Nangona kunjalo, iingcali zibacebisa ukuba bangazisebenzisi kakubi. Inkqubo inconywa ngaphezu kweyure ngeveki. Nazi imigaqo embalwa yokuqhuba le nkqubo:
- Ukukhupha ulusu luyimfuneko malunga nokunyuka kwamagqabi e-chamomile, i-linden.
Ubuso obuphambi kwangaphambili kufuneka bubekwe phezu kwe-steam kwaye luhlanganiswe ngethawula. I-Rasparivat ibhekene ne-10 - 15 imizuzu.
- Xa uqala ukudlulisa amachashaza amnyama, kuqala uhlambe izandla zakho kunye nezipikili, usule ngotywala.
- Ukuze ungalimazi ulusu, gquba iminwe yakho ngee napkins okanye kwikotton pads.
- Emva kokususa amabala amnyama ekhaya, sumba ubuso kunye nelotion yokuhlanza. Isinyathelo esilandelayo kunye nesimfuneko kufuneka sibe yinkqubo yokunciphisa ama-pores. Oku kunokwenziwa ngoncedo lweemaski, esiza kuxoxa ngazo ngezantsi, okanye unokusula ubuso bakho ngekrabhu yeqhwa.
- Ekupheleni kwenkqubo, sebenzisa ukhilimu ophuculisayo.
Ukucoca kunye nokukhenkcela
Iimaski zizona zifikeleleke, zisebenzayo kwaye zilula ukuhlambulula ubuso bamachashazi amnyama ekhaya. Enye yezona zinto ziphumelele ziimaski ezenziwe ngodongwe. Yilungisa ngokuhambelana nocyulo omuncu, sebenzisa ngobuso imizuzu eyi-10 - 15.
Iresiphi elandelayo kunye neqanda elimhlophe liquka i juisi ye-lemon - iispuni ezimbini, kunye nomlinganiselo ofanayo we-aloe juice. Hlanganisa lo mxube nomxube kwaye usetyenzise kwiindawo ezinamachashaza amnyama. Xa i-mask ibuna, kuyimfuneko ukusebenzisa isalathisi sesibini phezulu. Kwaye emva kwemizuzu eyi-15, hlambulula ngamanzi apholileyo.
Unokuza ukusiza i-kefir eqhelekileyo, njengoko iphelisa i-sebum. Faka isicelo kwisithuba imizuzu engama-20, uze uhlambe.
Ithintela ukubonakala kwamachaphazi amnyama njengaloo lotion: 1 isipuni se-sage, isipuni se-1 se-calendula zentyantyambo zityhila i-1 indebe yamanzi abilayo kwaye ubilise malunga nemizuzu engama-2. Emva kokupholisa, ukuhlaziya kunye nokujongana ubuso ngobuninzi ngamaxesha.
Xa ubonise ukunyamezela nomonde, uya kufezekisa iziphumo ezilungileyo - uhlambulule ubuso bamachashazi amnyama ekhaya!
I-Serum yokukhula kwe-eyelash
Khusela ubuso bakho ekumanyeni nasekuphepheni
Ukunyusa i-Allerger to Children
Ishokoledi eshisayo kwisitayela saseBrazil
Izipho ezincinci kubantwana
Ingqungquthela ihamba ngeinamoni
Ukuphuhliswa kwengane kunye nokufunda ihlabathi
Ukucwiliswa kwe-Wax ekhaya
Izilwanyana zamanqaku zokubumba ubuso
USergey Shnurov wamlisela ibhinqa elithembekileyo likaSobchak kwindali yobugebengu, ividiyo
Ukuphuhliswa kokuqala komntwana ukususela kumntwana